आमा भन्नेहरुले ममी भन्न थाले, चिठ्ठी लेख्नेहरु भिडियो कल गर्न थाले तर भावना फेरिएको छैन - उज्यालो पाटो
आमा भन्नेहरुले ममी भन्न थाले । चिठ्ठी लेख्नेहरु भिडियो कल गर्न थाले तर भावना फेरिएको छैन । परिवर्तनमा नअल्झिनुहोस्, भावना बुझ्नुहोस् ।
माथिको भनाइ उज्यालो पाटो फेसबुक पेजको इनबक्समा आएको थियो । ‘चिटिक्क परेको फोटो बनाएर उज्यालो पाटोको फेसबुक पेजमा सेयर गर्दिनुस् ल ।’ केहि बेर पछाडी प्रेषकले अर्को म्यासेज लेखेका थिए ।
सन्देश जब पढेँ, सामान्यतया हामीले सोच्ने र भनिरहने भनाई भन्दा फरक लाग्यो । हामी धेरैको गुनासो हुन्छ, हामीले हाम्रो परम्परा बिर्सियौँ । हामीले आफ्नोपन बिर्सियौँ र हामीले भावनाको गहिराइलाई भुल्यौँ । हामी प्रबिधिमा अभ्यस्त भएर मानवियता बिर्सियौँ । तर, इनबक्समा आएको सन्देश बिल्कुल यसको विपरित थियो ।
एकछिन सन्देशमा आएको कुरालाई बिर्सिएर व्यवहारमा हेर्ने हो भने हामीलाई सामान्यतया प्रबिधिले बिगारेकै जस्तो लाग्छ । एक दशक अगाडी हामी साँझमा परिवारसँग बसेर एउटै टिभीमा एउटै कार्यक्रम हेरेर रमाइलो गर्थ्यौँ । गाउँतिरको त माहौल नै अर्कै हुन्थ्यो । गाउँभरका मानिसहरु भेला भएर टिभी कार्यक्रममा झुम्थे । भेटघाट भइरहने र कुरा गरिरहने बिषय हुन्थ्यो । मानिसमा आत्मियता र अपनत्वको परिमाण फरक हुन्थ्यो ।
अहिले साँच्चै नै अवस्था फेरिएको छ । प्रबिधिले मानिसलाई सामुहिकताबाट एकाङ्गी बनाएको देखिन्छ तर हाम्रो शास्त्रमा भएको प्रसंगलाई यहाँ जोड्ने हो भने यसको सन्दर्भ थप प्रस्ट बन्छ ।
रामायणमा एउटा प्रसंग छ । जब सीतालाई रावणले अपहरण गरेर श्रीलंका पुर्याउँछन् तर राम र लक्ष्मण सीताको खोजीमा निस्किन्छन् । सीताको खोजीमा जंगल जंगल भौतारिदै थिए । त्यहि खोजमा उनीहरु मतंग ऋषिको आश्रममा पुगे । मतंग ऋषिको आश्रममा रामकी परमभक्तिनी शावरी बस्थिन् । जब ऋषि मतंगले शावरीलाई राम आएको खबर गरे तब शावरीको खुसी र भक्तिले नयाँ उचाइ पायो । शावरीले जीवनमा पहिलो पल्ट आफ्नो परमपुज्य प्रभुलाई देख्न पाएकी थिइन् ।
राम र लक्ष्मणले शावरीलाई आफुलाई भोक लागेको जानकारी गराए । शावरीलाई के चाहिन्थ्यो, उनी राम लक्ष्मणलाई केहि खुवाउँन जागरुक भइन् । वनमा त्यतिबेला बयर बाहेक केहि थिएन । कतै पाकेका र कतै काँचै रहेका बयरको स्वाद कस्तो होला भन्नेमा शावरीलाई द्धिविधा भयो । शावरीले बयरको थोरै चाख्दै मिठो भए बाँकी रहेको भाग भाँडोमा राख्दै जम्मा गरेर राम लक्ष्मणको सामु लिएर गइन् ।
आधा टोकेको जुठो बयर देखेर खान लक्ष्मणलाई संकोच लाग्यो । उनले रामले के गर्छन् भनेर एकछिन पर्खे । रामले बिना संकोच शावरीको जुठो बयर उठाएर कुपुकुपु खान थाले । त्यो देखेर आश्चर्यमा लक्ष्मणले सोधे, “तपाईले यी फोहोरी देखिने वृदाको जुठो बयर कसरी खान सक्नु भयो ?”
तब रामले जवाफ फर्काए, “चोखो छ कि जुठो भन्ने नहेर । कुन भाँडोमा छ भन्ने पनि नहेर । भाव हेर र खाना हेर ।”
रामायणमा माथिको दृष्य एकदमै भावनात्मक मानिन्छ । हामी शावरीको भक्तिभावमा दव्रिभुत हुन्छौँ र रामको महानतामा नतमस्तक तर हामीले यो प्रसंगलाई देवत्वकरण नगरेर व्यवहारिक बनाउँन सकेनौँ । हामीले त्यो प्रसंगलाई साधन र साध्यको भेदमा छुट्याउँन सकेनौँ ।
यसैले आममानिसमा साधनले नै सबै कुरा फरक पार्ने भ्रम छ । यसो त प्रबिधिले मानिसहरुलाई खराब गरेको देखाउँने धेरै अध्ययनहरुको निष्कर्ष पनि छ । यस्तै अध्ययनहरुलाई हेर्ने हो भने २०१२ मा चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सका वैज्ञानिकहरुले गरेको अध्ययन यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सो अध्ययन अनुसार प्रबिधिले मानिसहरुलाई अभ्यस्त बनाउँदै लगेको छ । मानिसहरुको मस्तिष्कको अध्ययन गर्दा प्रबिधिमा अभ्यस्त हुने मानिसहरुको र मद्यपानका अम्मलीहरुको मस्तिष्कमा समानता देखियो । यसले वास्तवमै मान्छेलाई प्रबिधिले असर गर्दै गरेको देखियो ।
तर के वास्तवमै प्रबिधिले हाम्रो सम्बन्ध, विचार र आदर्शहरुलाई क्षय गर्दै लगेको हो त ? या हामी केवल परिवर्तनसँग डराएका मात्रै हौँ ? हामी परिवर्तनहरुसँग डराएको पहिलो पटक होइन ।
हामीले पत्रपत्रिकालाई पनि सुरु सुरुमा गलत भन्यौँ । समाज र आदर्शहरु भाड्यो, भन्यौँ । त्यस्तै, हामीले सुरु सुरुमा टेलिभिजनलाई मुर्खहरुले हेर्ने भाँडो भनेर टाढा बस्न सुझायौँ तर अहिले हामी नै भन्छौँ कि टेलिभिजनको समय वास्तवमै राम्रो थियो । टेलिभिजनले परिवारलाई जोडेर राखेको थियो ।
हामीले कुनै बेला गलत भनेको पत्रपत्रिका र टेलिभिजन अहिले फर्केर हेर्दा सहि थिए भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ र अहिले प्राप्त प्रबिधिका साधनहरुलाई गलत देख्छौँ । हामी फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक साइटहरुले मान्छेलाई सतही र ढोंगी बनायो भन्छौ । हामी मोबाइलले मान्छेलाई एकलकाँटे बनायो भनेर सक्दो गाली गर्छौँ ।
तर जति गाली गरे पनि वा दुत्कारे पनि हाम्रो हात हातमा मोबाइल छ । हामी प्राय सबै कुनै न कुनै सामाजिक साइटमा धेरै समय बिताउँछौँ । हामी प्रबिधिबाट भाग्न सकेका छैनौँ । के बाध्यता हो हाम्रो ? हामीलाई कसैले बलात् प्रबिधि थमाइदिएको हो र ? प्रबिधिसँग हाम्रो मन रमाएको छैन र ? पक्कै पनि होइन । हामीले दुत्कारे जस्तो नकारात्मक मात्र छैन हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने प्रबिधि ।
१. आत्मियताको अन्त्य कि फैलावट ?
प्रबिधिलाई लाग्ने सबै भन्दा पहिलो आरोप हो, यसले हाम्रो सम्बन्धमा हुने आत्मियता खाइदियो, हामी मान्छेसँग कुरा गर्न भन्दा फेसबुकको टाइमलाइन स्क्रोल गर्नमा रमाइलो मान्न थाल्यौँ ।
तर विचार गर्ने हो भने प्रबिधिले हाम्रो आत्मियताको अन्त्य गर्न खोजेकै छैन, बरु हाम्रो आत्मियतालाई विस्तार गरेको छ । हामी अहिले कुनै समयमा एउटा व्यक्तिले राख्न सक्ने सम्बन्धको सिमालाई सहजै भत्काउँन सक्छौँ । हामी टाढा टाढा रहेका आफन्तहरुसँग पनि लाइक र कमेन्ट गर्दा गर्दै नजिक भइरहेका हुन्छौँ । उनीहरुको जानकारी लिइरहेका हुन्छौँ र आफ्नो हालखबर दिइरहेका हुन्छौँ ।
हो, आत्मियताको सघनतामा केहि प्रभाव परेको छ तर जसै हामी प्रबिधिलाई साधन मात्रै मान्छौ र यसले पार्ने असरलाई प्राकृतिक मान्न थाल्छौ, आत्मियताको सघनता पनि बढ्नेछ ।
२. प्रबिधिले छेलेको मान्छे मन
मैले माथि पनि सन्दर्भ उप्काएको थिएँ कि प्रबिधि हामीलाई कसैले बलात् थुपारिदिएको होइन । बरु प्रबिधिले हाम्रा कमजोरीहरुलाई जित्न सघायो, हाम्रा अबरोधहरुलाई छिचोल्न मद्दत गर्यो । हामीले जानेर वा नजानेर भए पनि जे कुराहरु सोचिरहेका थियौँ, ति हात पार्न सहयोग गर्यो । यसैले प्रबिधि हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीसँगै अभिन्न अंग भएर रहेको छ ।
वास्तविकता यो हो कि प्रबिधिले हामीलाई सुविधा थपिदियो । हाम्रो कोमलता र अफ्ठ्ठ्याराहरुलाई सम्बोधन गरिदियो । यसैले प्रबिधिले सतहमा जे दृष्य देखाए पनि पर्दा पछाडी यसको चालक भने मान्छेको मन नै हो । मान्छेको सन्तुष्टी नै हो ।
अन्तिममा भन्नु पर्छ, जसरी हिजो पत्रपत्रिका आयो, हामी तर्सियौँ तर पनि मानविय संवेदना त्यसले समाप्त पारेन । सुरुमा मुर्खहरुले हेर्ने भनिएको टेलिभिजनले परिवार जोड्थ्यो भनेर त्यसको महानता सम्झिन्छौँ । त्यसरी नै प्रबिधिसँग पनि अहिले हामी आत्तिएका मात्रै हौँ । यसलाई आत्मसाथ गरेर केवल साधनका रुपमा मात्रै सोचे, योसँग तर्सिनु पर्ने कुरा केहि छैन ।
वाल्मिकीले रामायणमा पनि साधन र साध्य बिचको भेदलाई शावरीका मार्फतबाट बुझाएका छन् । अत: भन्न सकिन्छ, आमा भन्नेहरुले ममी भन्न थाले । चिठ्ठी लेख्नेहरु भिडियो कल गर्न थाले तर भावना फेरिएको छैन । परिवर्तनमा नअल्झिनुहोस्, भावना बुझ्नुहोस् ।